Kenya oo ka hadashay weerar Bas oo ay fuliyeen Al-Shabaab | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Kenya oo ka hadashay weerar Bas oo ay fuliyeen Al-Shabaab
Xubno la sheegay inay ka tirsanaayeen Ururka Al-shabaab ayaa weerar jidgal ah waxaa ay ku qaadeen gaari Bas ah oo ka tegay Magaalada Mandeera kuna sii jeeday Magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Booliska Kenya oo weerarka ka hadlay ayaa waxaa ay sheegeen in ay iska caabiyeen Ciidamadooda weerar kaga yimid dhinaca Al-Shabaab, xilli ay galbinayeen gaadiid farabadan oo kusii jeeday Magaalada Nairobi.
Qoraal kasoo baxay Booliska Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in Gaariga Baska ah ay saarnaayeen 25 ruux uusan wax khasaaro ah soo gaarin, isla markaana Ciidamada ay si adag u difaaceen gaariga iyo dadka saran.
“ Dhamaan Ciidamada waa ay nabad qabaan iyo dadkii saarnaa Gaariga baska ah, kuwii na soo weeraray waxaa ay u soo gudbeen dhanka xaduudka Soomaaliya waana ku raad joognaa ayaa lagu yiri” Qoraalka Booliska Kenya.
Al-Shabaab ayaa dhowrkii Bilood ee la soo dhaafay waxaa ay weeraro kala duwan ka fuliyeen Gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya, halka Ciidamada Kenya ay duqeymo diyaaradeed ka geysteen dhul Miyi ah oo ku yaal degaan oo ka tirsan gobolka Gedo.
Previous articleAMISOM Sector 1 Commander Visits Troops on the Frontlines
Next articleKulamo looga hadlayo khilaafka doorashooyinka oo Muqdisho ka socda